Oovimba boVimba boLondolozo- Ilungelo laseMelika lokwazi
Iimeyile zangaphakathi ze-FDA: Weedkiller efumaneka eGranola nakwiCrackers
ezaposwa ngomhla Ngamana 2, 2018 by USusan Lang
Eli nqaku lalipapashwe ekuqaleni kwi Umgcini.
Oososayensi bakarhulumente baseMelika bafumanise umntu okhula kokhula onxulunyaniswa nomhlaza kuluhlu lokutya okutyiwa kakhulu, ii-imeyile ezifunyenwe ngenkululeko yokucela ulwazi.
Ulawulo lwezoKutya kunye noLawulo lweziyobisi (FDA) uvavanyo iisampulu zokutya kwintsalela ye-glyphosate, eyona nto isebenzayo kumakhulu eemveliso ezisetyenziswa kakhulu zokutshabalalisa ukhula, isithuba seminyaka emibini, kodwa ingekazivezi iziphumo ezisemthethweni.
Kodwa amaxwebhu angaphakathi afunyenwe nguMlondolozi abonisa ukuba i-FDA ibinengxaki yokufumana nakuphi na ukutya okungahambisi mkhondo wesibulala-zinambuzane.
"Ndizise abaqhekezi bengqolowa, igranola cereal kunye nomgubo wengqolowa ovela ekhaya kwaye kukho isixa esifanelekileyo kuzo zonke," usokhemisi we-FDA URichard Thompson wabhala koogxa kwi-imeyile kulo nyaka uphelileyo ngokubhekisele kwi-glyphosate. UThompson, ozinze kwilabhoratri yengingqi ye-FDA e-Arkansas, wabhala ukuba i-broccoli yayikukuphela kokutya "awayenakho" akufumanisileyo kungenayo i-glyphosate.
Le imeyile yangaphakathi ye-FDA, yomhla kaJanuwari 2017, iyinxalenye ye- umtya wonxibelelwano lwe-FDA Iinkcukacha zeenzame zearhente zokuqinisekisa ukuba ungakanani umlingo weedkiller odumileyo oboniswayo kukutya kwaseMelika. Iimvavanyo ziphawula uviwo lokuqala lwe-arhente.
“Abantu bayakhathala malunga nokuba zeziphi na izinto ezingcolisayo ezikukutya kwabo. Ukuba kukho ulwazi lwenzululwazi malunga nale ntsalela ekutyeni, i-FDA kufuneka ikhuphe, ”utshilo uTracey Woodruff, unjingalwazi kwiYunivesithi yaseCalifornia eSan Francisco School of Medicine. “Inceda abantu bathathe izigqibo benolwazi. Abarhafi bahlawulele urhulumente ukwenza lo msebenzi, kufuneka babone ulwazi. ”
I-FDA ihlawuliswa rhoqo ngonyaka kuvavanya iisampulu zokutya kwintsalela yokubulala izitshabalalisi ukubeka esweni amanqanaba entsalela ngokungekho semthethweni. Inyani yokuba iarhente kutsha nje iqale ukuvavanya i-glyphosate, ikhemikhali esetyenziswe ngaphezulu kweminyaka engama-40 kwimveliso yokutya, ikhokelele kugxekwa kumaqela abathengi kunye neOfisi yoXanduva kaRhulumente (i-GAO). Iifowuni zovavanyo zikhule emva kwe-Arhente yaMazwe ngaMazwe yoPhando ngomhlaza (IARC) yahlulahlula i-glyphosate njenge-carcinogen yabantu ngo-2015.
IGlyphosate yaziwa njengeyona nto iphambili kuMonsanto Co's Roundup brand. Ngaphezulu kweepawundi ezingama-200m zisetyenziswa minyaka le yi-US abalimi kumasimi abo. I-weedkiller ifafazwa ngokuthe ngqo kwizityalo ezithile, kubandakanya umbona, iimbotyi zesoya, ingqolowa kunye ne-oats. Abalimi abaninzi bayayisebenzisa emasimini ngaphambi kwexesha lokukhula, kubandakanya abalimi besipinatshi kunye nabavelisi beamangile.
Ukufunyanwa kuka-Thompson kwe-glyphosate kwenziwa njengoko wayeqinisekisa iindlela zakhe zohlalutyo, oko kuthetha ukuba ezo ntsalela ngekhe zibandakanywe kuyo nayiphi na ingxelo esemthethweni.
Ngokwahlukeneyo, i-FDA chemist uNarong Chamkasem wafunyanwa "Ukunyamezelana ngaphezulu" kwamanqanaba e-glyphosate kumbona, ifunyenwe kwii-6.5 iinxalenye kwisigidi, i-imeyile ye-FDA ithi. Umda osemthethweni ngu-5.0 ppm. Inqanaba elingekho mthethweni lingaxelwa kwi-Arhente yokuKhuselwa kokusiNgqongileyo (i-EPA), kodwa umphathi we-FDA ubhalele igosa le-EPA ukuba umbona awuthathwa njenge "sampuli esemthethweni".
Xa ebuzwa malunga ne-imeyile kunye nokuvavanywa kwe-arhente, isithethi se-FDA sathi kuphela ukuba i-FDA ayifumananga nawaphi na amanqanaba angekho mthethweni kumbona, isoya, ubisi okanye amaqanda, izinto ezine ezijonga njengenxalenye ye-glyphosate "isabelo esikhethekileyo". Khange ajongane neziphumo ezingekho mthethweni ezivezwe kwii-imeyile.
Iziphumo ezisemthethweni ze-FDA kufuneka zikhutshwe kamva kulo nyaka okanye ekuqaleni kuka-2019 njengenxalenye yengxelo yayo yonyaka ye-2016. Iingxelo ngesiqhelo ziyakhululwa Kwiminyaka emibini ukuya kwemibini enesiqingatha emva kokuba idatha iqokelelwe.
Kunye ne-glyphosate, iarhente ibikhona ukuzama ukulinganisa intsalela yemichiza yokutshabalalisa ukhula i-2,4-D kunye ne-dicamba ngenxa yokuqikelelwa kokusetyenziswa kokhula kokhula kwizityalo ezitsha zemfuza. Isithethi se-FDA sathi i-arhente "yandise amandla" okuvavanya ukutya kokutya kwezi zitshabalalisi zonyaka.
Ezinye iziphumo zichaziwe kumaxwebhu e-FDA abonisa ukuba kwi-2016 Chamkasem ifumene i-glyphosate in iisampulu ezininzi zobusi. I-Chamkasem ikwafumene i-glyphosate kwiimveliso ze-oatmeal. I-FDA yamisa okwexeshana kuvavanyo emva kwezo zinto zifunyanisiweyo, kwaye ilebhu kaChamkasem "yabelwa ezinye iinkqubo", amaxwebhu e-FDA abonisa. I-FDA ithe ezo mvavanyo zazingeyonxalenye yesabelo sayo esisemthethweni se-glyphosate residue.
Ukuvezwa kweyeza lokubulala izinambuzane ngokutya kuthathwa njengomngcipheko wezempilo. Abalawuli, IMonsanto kunye nomdla kumzi mveliso we-agrochemical uthi intsalela ye-pesticide ekutyeni ayinabungozi ukuba iphantsi komda osemthethweni. Kodwa izazinzulu ezininzi ziyayiphikisa loo nto, zisithi ukutya ixesha elide ekudibaniseni indibaniselwano zinokubulala.
Ugqirha wezobisi uLinda Birnbaum, ongumlawuli we-US National Institute of Environmental impilo IiNzululwazi (i-NIEHS), zithe uhlalutyo lwangoku lolawulo lweengozi zemichiza yokubulala izitshabalalisi alunikeli ngxelo ngamanqanaba asezantsi okuvezwa kokutya.
"Nokuba amanqanaba asezantsi amayeza okubulala izitshabalalisi, sichanabeke kuninzi kwaye asiyibali inyani yokuba sivelisiwe," utshilo uBirnbaum.
ISebe lezoLimo laseMelika laliza kuqala ukuvavanya ukutya kokutya kweentsalela zeglyphosate kwi2017 kodwa ulahle isicwangciso.
Ukunqongophala kwedatha yentsalela kurhulumente kuza njengoko iMonsanto izama ukuthintela ubungqina malunga nentsalela yokutya ekungenisweni kwinkundla apho inkampani ikhona ukulwa izityholo iimveliso zayo zeRoundup zibangela umhlaza.
Kwityala elimiselwe ukuxoxwa kwetyala ngomhla we-18 kweyeSilimela, kutshanje u-Curtis Karnow, ijaji yenkundla ephakamileyo usikhanyele isicelo senkampani ukugcina ijaji ingeva malunga nentsalela ekutyeni. Ijaji yathi nangona iMonsanto ikhathaza ulwazi "luya kulitshisa ijaji ngokuchasene neMonsanto ngokusekwe kukoyika ukuba banokuthi babhencwe", olo lwazi "akufuneki lubekelwe bucala".
Ukutya kwengqondo, Uphando lwethu, Pesticides umhlaza, UCarey Gillam, Dicamba, FDA, glyphosate, herbicides, IARC, IMonsanto, USDA, Abaluki bokhula